ICatalunya Casas: IParadesi yeKhenketho yangoku 'Villa Ainmi' eCosta Brava!
UCatalunyaCasas unezimvo eziyi-668 zezinye iindawo.
Yamkela iingcinga zakho zeholide kule paradesi yanamhlanje yeholide kwiCosta Brava-kwiikhilomitha nje ezingama-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseGirona.
Ukuqhayisa ngeendawo zokulala ezi-4 kunye namagumbi okuhlambela ama-3, yonke into efunekayo yokurenta isesandleni sakho: indawo yokuqubha enkulu, iindawo zokuhlala ezihlala ilanga, i-BBQ, indawo yokutyela egqunyiweyo yangaphandle, amagumbi okulala aqaqambileyo nanomoya (ama-2 anokufikelela ngokuthe ngqo egadini) kunye neesofa zegadi ezinomthunzi. Konke okufuneka udibanise yile cocktail egqibeleleyo yomkhenkce! Ukuba uthatha isigqibo sokuyeka iholide yakho yokurenta, iilwandle ezintle zaseCosta Brava ziyimizuzu nje engama-20 ukusuka emnyango wakho, kunye nalo lonke ulonwabo kunye nokudlala okuya kuziswa kwindawo elwandle!
Amalungiselelo egumbi lokulala ahamba ngolu hlobo lulandelayo:
Igumbi lokulala 1: Ibhedi ephindwe kabini
Igumbi lokulala 2: Ibhedi ephindwe kabini ephumela egadini
Igumbi lokulala 3: 2 x iibhedi zomntu ngamnye eziphuma egadini
Igumbi lokulala 4: 2 x iibhedi zomntu ngamnye.
Ulwandle: 30 km
Ivenkile enkulu: 700 m
Isikhululo sikaloliwe: 5 km
Ubungakanani bequla: 4 m x 11 m
Ubunzulu bequla: 0.50 m
Pool ubunzulu ubunzulu: 1.60 m
I-Catalunya Casas igxile ekuqeshweni okukhethwe ngesandla, okulawulwa ngokukodwa kwi-villa yentsapho (enechibi kunye negadi!) e-Mallorca, e-Ibiza, nakwindawo yase-Barcelona. Iirenti zethu zeeholide zisondele ngokwaneleyo kubakhenkethi 'emeccas' ukuze sonwabele zonke izibonelelo ezinokuthi zinikezelwe zezi ndawo, kodwa kude ngokwaneleyo 'ngaphandle komzila ogqityiweyo' apho iindwendwe zethu zinethuba lokonwabela kunye namava eCatalonia / Spain yokwenyani.
Nceda uqaphele ukuba sinikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo ozikhethelayo ukwenzela ukuba ube lula kunye nokonwabela iholide. Apha ngezantsi kukho iinketho ezimbalwa ezinokuthi zibhukishelwe isongezelelo esongezelelweyo emva kokuba ugcino lwakho luqinisekisiwe:
Ukutya kwi-villa (i-paella, i-tapas, i-BBQ yaseSpain)
In-villa yokungcamla iitshizi zalapha ekhaya, iwayini, i-cavas, itshokolethi, inyama yedeli
Udluliselo lwesikhululo seenqwelomoya
Iitawuli kunye neelinen (ezi ayiqukwanga kwintlawulo yakho yokubhukisha kwaye ihlawuliswa i-euro ezili-10 ngomntu ngamnye ngeseti yelinen, kunye nee-euro ezi-5 ngomntu ngeseti yeetawuli)
Ukungena kwangethuba: I-euro ezingama-20 ngeyure ngaphambi kwe-17h (ukuhlala ngaphezulu kobusuku obu-3)
Ukuphuma kade: ii-euro ezingama-20 ngeyure emva kwe-10h (ukuhlala ngaphezulu kobusuku obu-3)
Uhambo / ukhenketho
Ukulungiswa komoya/Ukufudumeza (ukuba kukho).
Ibhedi / isitulo esiphezulu
Ipakethi yolwamkelo (ezaliswe zimveliso zasekuhlaleni ezimnandi)
Nceda uzive ukhululekile ukubuza ulwazi oluthe kratya ngayo nayiphi na kwezi zingentla!
Inombolo yobhaliso yeSebe loKhenketho: HUTG-058195-49
* Irhafu yoKhenketho: i-euro eyi-1,00 ngomntu ngamnye oneminyaka eyi-16 ubudala, ngobusuku.
* Le ndawo ayivumeli izilwanyana zasekhaya.
* Le ndawo inesimo somoya kwintlawulo eyongezelelweyo.
* Le ndawo ayiwavumeli amaqela angaphantsi kweminyaka engama-25 ubudala.
1) Amaqela ethu okugcina amakhaya afumene uqeqesho olukhethekileyo kwiimfuno zokucoca. Ngaphambi nasemva kokurenta kwevilla yonke, siye saphucula iinkqubo zethu zokucoca ngokwezikhokelo zoMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO). Zonke iizowuni zepropathi nganye, kuqukwa neendawo zoqhagamshelo eziphezulu ezinje ngamaqhuqhuva eengcango kunye nezibambo, iitephu, kunye nezitshixo ziqale zicocwe kwaye zibulawe iintsholongwane ngeemveliso zokucoca ezisekelwe kwiblitshi. Amayeza okubulala iintsholongwane ashiywe ukuba athobe kangangemizuzu eli-10 ukuze afumane uncedo olupheleleyo lokucoca.
2) Izibonelelo zexesha lokucoca zandisiwe ukulungiselela oku kungasentla.
3) Iipropati zethu zifikeleleka ngebhokisi yeqhosha ngoko akukho qhagamshelwano lokufika ubuso ngobuso. Izitshixo zibulawa iintsholongwane emva kokuhlala rhoqo.
4) Zonke iitawuli zethu kunye neelinen zethu zibonelelwe ngobungcali kwaye i-Covid-19 icociwe ngu-Elis, i-Elis, impahla yempahla yamazwe ngamazwe, ucoceko kunye nenkonzo yamaziko anemisebenzi kumazwe angama-28 kulo lonke elaseYurophu naseLatin America.
5) Zonke iibhedi kunye nemithwalo zinezikhuselo ezikhuselayo.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-668 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Inombolo yomthetho: HUTG-058195
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sils